Apple Music ho mariky ny kolontsaina hoy i Jimmy Iovine | Avy amin'ny mac aho
Apple Music ho mariky ny kolontsaina hoy i Jimmy Iovine
Javier Porcar | | Apple Music, maro
vao haingana Jimmy Iovine nanome resadresaka tamin'ny magazine Isan-karazany. Toy izany koa fanehoan-kevitra momba ny tanjon'i Apple miaraka amin'ny serivisy mozika mivantana, ary koa ny fifanarahana natao niaraka tamin'ny fanampin'ireo.
Iovine, tsy manana toerana manokana ao amin'ny orinasa, fa mizara ny lahasa fanompoana Eddy cue , Dr. Dre, Trent Reznor, ary Larry Jackson. Ny anjara asan'i Jimmy Iovine dia mifantoka amin'ny famaranana ny fifanarahana amin'ireo mpanakanto ary efa nandray anjara mavitrika tamin'ny Apple Music hatramin'ny nahazoany Beats tamin'ny 2014.
Apple dia efa nanohana ireo exclusives, amin'ny audio ary izao amin'ny horonantsary. Ny endrika nofidina ho an'ny fandefasana horonantsary dia lamin'ny famokarana programa fahitalavitra roa.Tamin'ny resadresaka nifanaovana dia tsy mandeha amin'ny antsipiriany momba ny drafitra ho avy Apple, ambonin'izany rehetra izany mba tsy hanambara drafitra amin'ny fampandrosoana ary hahazo fanantenana bebe kokoa izy ireo noho ny zava-baovao entin'izy ireo. Na izany aza, miresaka ny fametrahana ny serivisy mozika an'ny orinasa ho "Toro-kevitra momba ny kolontsaina izy."
Raha nanontaniana momba ny famokarana atiny tany am-boalohany sy ny fampitahana azy amin'ny Netflix izy, ary nanontany raha mijery ny Apple Music ho fikasana hifaninana amin'ireo toa an'i Netflix eo amin'ny sehatry ny votoaty tany am-boalohany izy, nanohitra izany. «Tsy hiteny toy izany aho ...Tsy misy ifandraisany amin'ny Netflix »
Tamin'ny ampahany iray hafa tamin'ny resadresaka nifanaovana taminy dia nanontaniana izy momba ny atiny manokana sy ny fifanolanan'i Apple amin'ireo mpifaninana roa aminy ary orinasa mpitana firaketana, nilaza i Iovine fa manandrana izy ary ireo fitsapana ireo dia tsy niteraka fifandonana tamin'ireo mpiara-miasa taloha teo amin'ny tontolon'ny mozika, na eo aza ny mangidy. amin'ny atiny manokana.
Iovine dia nanondro fa ny orinasa dia vonona ny hanohana izay tetikasa tian'ny mpanjifa hatao varotra ary mahazo fifanarahana amin'ny fanaparitahana azy. Ankoatr'izay, mahita ny orinasa niomana ny "hiteny fiteny roa" amin'ny fahazoana ny tsenan'ny mozika sy ny haitao amin'ny fiteny.
Ao anatin'ilay dinidinika dia misy olana manokana momba ny tenany manokana, ny fiantombohany sy ny fifandraisany amin'i Dr. Dre. Toetra tsy manam-paharoa azonao ianarana bebe kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Music » Apple Music ho mariky ny kolontsaina hoy i Jimmy Iovine
Manohy ny làlana kely fitsidihany i Tim Cook ary Alemana io
Ny Duplicates Cleaner, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra